तपाईंको सम्बद्ध मार्केटिंग कार्यक्रमहरूमा लक्षित ट्राफिक उपकरणहरू यातायात सम्बद्ध गर्न
by बेभर्ली सानो on अप्रिल 15, 2021
यहाँ ड्राइभ गर्न डिजाईन गरीएको उपकरणहरू पत्ता लगाउनुहोस् लक्षित ट्राफिक तपाइँको लाई सम्बद्ध मार्केटिंग कार्यक्रमहरू
नमस्कार! मेरो नाम बेभर्ली लिटिल छ र मेरो ब्लगमा स्वागत छ, "यातायात सम्बद्ध गर्न"। यो पूर्ण फिचर गरिएको WordPress ब्लग उत्तम उपकरणको अंश हो तपाईंले सामिल हुनुभयो भने बिज अनलाइन निर्माण गर्नुहोस्। यस साइटको लेखहरूको मजा लिनुहोस्, सिफारिश गरिएको ट्राफिक उपकरण र पैसा कमाउने सम्बद्ध मार्केटिंग कार्यक्रमहरू। म संयुक्त राज्यमा बस्छु र उत्तर पश्चिमी विश्वविद्यालय (गो बिरालाहरू) बाट स्नातक गरीएको छु।
मलाई लक्षित ट्राफिक खोज्न मन पर्छ ...
मेरो सुरुको क्यारियर छनौट मानव संसाधन थियो जुन मलाई वास्तवमै मन पर्थ्यो। विशेष कामको लागि सही व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु मेरो काम हो। यसैले, मैले इन्टरनेट मार्केटिंगमा एक प्राकृतिक संक्रमण पत्ता लगायो, जसका लागि सही लक्षित ट्राफिक जोड्नु पर्छ जो सही सम्बद्ध मार्केटिंग कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्दछ। त्यस पछि, म रूपान्तरण गरिएको लक्षित ट्राफिक पत्ता लगाउन मन पराउँछु। हाल, म अर्ध सेवानिवृत्त छु। म अब एक छु Amway स्वतन्त्र व्यवसाय मालिक मा विशेषज्ञता लक्जरी छाला हेरचाह, पोषण, हावा र पानी शुद्धीकरण प्रणाली.
मलाई एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम मनपर्दछ ...
सर्फिंग गर्दा, मैले सम्बद्ध मार्केटिंग प्रोग्रामहरूप्रतिको प्रेम पनि फेला पारे जुन अवशिष्ट आय उत्पन्न गर्दछ। मेरो लक्ष्य भनेको एक इन्टरनेट मार्केटिंग साम्राज्य निर्माण गर्नु हो, कला लक्षित यातायात उपकरणहरू र सम्बद्ध बजार कार्यक्रमहरूको राज्यमा केन्द्रित।
र मलाई रमाईलो गर्न मन पर्छ!
मलाई पढ्न, संगीतको विभिन्न रूपहरू र पुरानो शास्त्रीय चलचित्रहरू हेर्न रमाईलो लाग्छ। मलाई मनपर्छ पकाउने, फेसन शपिंग र सर्फिंग पनि!
तपाइँको दिन राम्रो छ र जीवनमा सर्वश्रेष्ठको आनन्द लिनुहोस्